HS:-Isbedelada ka curtay dalka Soomaaliya iyo waxqabadka madaxda qaranka
Posted by admin on November 15 2012 23:32:27
HS:-Isbedelada ka curtay dalka Soomaaliya iyo waxqabadka madaxda qaranka amaba qaabka ay u shaqeyso dowlada cusub. Warbixin+Sawiro
HS:- Qormadan waxey ka turjumeysaa isbedelka rasmigaa ee uu dalka Soomaaliya lugaha la galay hadey noqon laheyd hogaanka sare, siyaasadaha dibada, shacabka oo u jeestay sidii ay xaalada ay hada ku jiraan ugu bixi lahaayeen iyo wax la mid ah.
Inkasta oo aan xaalada Soomaaliya ka hadalkeeda lagu soo koobi karin maalin iyo labo hadane waa lama huraan in intii laga gaaro bulshada loo soo bandhigho xumaan iyo samaan.
Hadaba bal aan ku hormarno heerka ay mareyso siyaasada guud ee dalka waxii ka danbeeyey doorashadii gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Prof Mohamed Csmaan Jawaari, doorashadii taariikhiga aheyd ee lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyada federalka Soomaaliya Prof Hasan Shiikh Mohamud, iyo magacaabidii R/wasaaraha cusub ee Jamhuuriyada Dr Cabdi-Farax Shirdoon ( Saacid) iyo ugu danbey golaha cusub ee wasiirada ee lagu dhawaaqay dhawaan.
1- Doorashadii Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Prof Jawaari
Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka waa rug cadaa siyaasadeed wax badana ku soo jirey siyaasada Soomaaliya waana nin inta badan ka duwan gudoomiyayaashii dalka soo maray waxii ka danbeeyey bur burkii Soomaaliya. Prof Jawaari ayaa ah shaqsi howlaha baarlamaanka u wada sidii la rabay maadaama ay mudanayaasha ka doodayaan xeer hoosaadyadii lagu dhaqi lahaa si looga hortago in lagu tunto xeerka iyo sharciyada laga doonayo in ay u hogaansamaan mudanayaashu.
Magaalada Mogdishu waxaa ka taagan wal wal xoogan oo soo food saaray mudanayaal badan oo ka tirsan baarlamaanka cusub siiba kuwooda doonaya iney iska maqnaadaan oo ay ahaadaan mudane baarlamaan iyagoo aan hal maalin soo xaadirin, waxaane ka mid ah mudanayaasha aadka uga walwalaya xeer hoosaadka cusub r/wasarahii hore ee Soomaaliya C/wali Gaas iyo koox ka mid aheyd golahiisa wasiirada oo ka mid ah baarlamaanka cusub iyo gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Hasan oo dhamaantood doonaya iney baarlamaanka ka ahaadaan dibad joog sidii uu horey u sameeyey Xildhibaan Cali Mohamed Geedi oo isagoo Kenya iska jooga loogu yeeri jiray mudane baarlamaan.
Gudoomiye Jawaari iyo ku xigeenadiisa ayaa lagu amaanay sida ay u gudanayaan howlaha bilaawka ah ee horyaala baarlamaanka cusub ee dhawaan la soo dhisay.
2- Madaxweynaha Jamhuuriyada Prof Hasan Shikh Mohamud waa aqoonyahan Soomaaliyeed nasiibna u yeeshey inuu noqdo madaxweynahii ugu horeeyey ee sharcigaa ee dal iyo dibad laga aqoonsan yahay waxii ka danbeeyey burburkii dowladii Kacaanka ee uu garwadeenka ka ahaa madaxweynahii hore ee Soomaaliya Marxuun Mohamed Siyaad Bare.
Doorashadii madaxweynaha cusub waxey aheyd mid aad u soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii uu hal mar ka soo dhax baxay aqoonyahano badan oo mudo ku noolaa dibadaha halka uu isagu ka mid ahaa aqoonyahanadii aan gudaha wadanka meelna uga bixin 22-kii sano ee colaada.
Hadaba maxaa u qabsoomay madaxdweynaha 60-kii cisho ee ugu danbeysay waxii ka danbeeyey doorashadii madaxweynimada Soomaaliya oo xilkaan loo doortay?
Madaxweyne Hasan Shiikh inkasta oo ay hor yaalaan howlo cul culus waxaad moodaa inuu ku guuleystay dhawr qodob oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed sharafna u ah dowlada cusub kuwaasi oo ay ugu horeeyaan.
a) Madaxweynaha cusub waa shaqsi ay siyaasadiisa miisaan leetahay waxkastana waqti siinaya isagoo aan fiirineyn daahidaan laakinse fiirinaya howshaas ma hirgashay mise ma hirgalin iyo wax la mid ah.
b) Waxuu noqday madaxweynahii ugu horeyey ee loo magacaabo Soomaaliya mudo 21 sano ah oo dheg jalaq u siin waayey hanjabaadyo badan oo uga imaanayey shaqsiyaad doonayey in ay amarada dowladiisa siiyaan iyagoo doonaya iney farta ugu fiiqaan hadba sidey iyagu jecel yahiin dhaqanadaas oo dalka Soomaaliya ka noqday wax iska caadi ah xiliyadii lagu jiray kumeel gaarka.
C) Waxuu soo magacaabay r/wasaare soo dhisa xukumad tiro yar oo tayo leh isagoona u madax banaaneeyey howlahiisa shaqso wasiirka 1aad halkii kuwii isaga ka horeeyey ku jiri jireen qilaaf joogto ah maadama ay wasiirka 1aad ku qabsan jireen howshiisa sidaasina ku bur bureen dowlado badan.
Sikastaba madaxweyanaha Soomaaliya iyo dowladan uu garwadeenka ka yahay ayaa siweyn loogu rajo weyn yahay iney dalka gaarsiiyaan 4ta sano ee inagu soo aadan horumar, taasi oo laga yaabo amaba suuro gal ka dhigeyso in dib loo doorto 5 sano oo hor leh hadii sida ay hada wax u wadaan ku socdaan oo ay xooga saaraan dib u dhiska dalka iyo fuduyenta maamul u sameynta gobolada dalka oo ah howsha looga fadhiyo hada si awooda xukumada dhexe loo gaarsiiyo dalka oo dhan culyskana looga yareeyo caasimada Soomaaliya ee Mogdishu.
3- R/wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr Cabdi-Faarax Shirdoon (Saacid)waxuu madaxweynaha jamhuuriyada iyo gudoomiyaha baarlamaanka kaka mid yahay inuu wax ku soo bartay canshuurtii wadanka waana shaqsi sida hada muuqata marka la eego xukumada uu soo dhisay tiradeeda iyo sida uu u wanaajiyey haweenka Soomaaliyeed wax badan oo isbedel ah laga filan karo mustaqbalka dhaw iyo kan fogba.
Inkasta oo aan siyaasada Soomaaliya saadaal dhab ah laga bixin karin marka dib loo eego waxii horey loo soo maray hadane waxaa la dhihi karaa 3da masuul ee ugu sareysa hogaanka dalka dhamaantood waa dad ku haboon xilalka loo dhiibay waxaadna moodaa inuuba illaah isla doontay dowladaan cusub marka la eego qaabka ay wax u dhaceen labadii sano ee ugu danbeysay oo marba marka ka danbeysa uu wadanku galay marxalad cusub oo rajo galineysa bulshada Soomaaliyeed.
Nasiibka aysan helin hogaamiyaashii dalka Soomaaliya soo maray 22-kii sano ee ugu danbeysay iyo marxalada ay la soo kulmeen hogaankaan cusub.
Waxey ku soo aadeen xili uu geeriyooda ninkii qaarada Africa qaska ugu badan ku hayey ee hubka iyo lacagta siin jiray argagixisada Soomaaliya madaxweynahii Liibiya Qadaafi. waxey ku soo aadeen xili ay Soomaaliya ka baxday kumeel gaarkii caasimadii Soomaaliya ee Mogdishuna lagu doortay hogaankii dalka. waxey ku soo aadeen xili jahwareer siyaasadeed ka jiro geeska Africa maadaama uu geeriyooda ninkii arimaha Soomaaliya amaba bariga Africa siduu doono ka yeeli jray r/wasaarahii Ethiopia Malez Zanaawi.
Waxey ku soo aadeen xili ay bur bureen argagixisadii Soomaaliya ee Shabaab iyo ajaaniibtooda. waxey ku soo aadeen xili bulshada Soomaaliyeed meel iska dhigeen qabiilka oo ay doonayaan nabad iyo nolol. arimahaani oo dhan waxaad moodaa in ay yahiin wax uu ilaah isla doontay ee aan ku imaan dadaal la sameeyey.
Isku soo duuboo hogaanka cusub iyo sidey wax u wadaan wax badan ayey ka duwan yahiin nidaamyadii ka horeeyey xiligii fowdada iyo boobka lagu jiray Soomaaliya waxey lugaha la gashay qarnigii nidaamka iyo kala danbeynta.
La soco qeybteena danbe golaha cusub ee wasiirada jamhuuriyada Soomaaliya